एभिन्युज टेलिभिजनके तपाई आफुखुशी चस्मा प्रयोग गर्नुहुन्छ ? मोतिबिन्दु होला है ! (हेर्नुहोस् भिडियो) - एभिन्युज टेलिभिजन
के तपाई आफुखुशी चस्मा प्रयोग गर्नुहुन्छ ? मोतिबिन्दु होला है ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
31 Bhadra 2075 Sunday 3:03 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौँ : प्रदुषणबाट बच्न होस वा फेसनेबल देखिनका लागि सहरी क्षेत्रमा चस्मा अनिवार्य जस्तै बनेको छ । तर रंग, फ्रेम र डिजाईन मात्र हेरेर मनोमानी ढङगबाट प्रयोग गरिने चस्मा आँखाका लागि उल्टै जोखिम बन्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपालमा ८० रुपैयाँदेखी ३० हजारसम्मका चश्मा पाइन्छन् । अनि नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी सनग्लास चिनबाट आउने गरेका छन् । धेरै चस्माबाट एक दुईवटा छान्नु गाह्रो भएपनि देख्दा आर्कषक लाग्ने सबै चस्मा आखाको लागि उपयुक्त हुदैनन भन्ने कुरा उपभोक्ताले जान्न आवश्यक छ । आँखा निकै संवेदनशिल अंग भएकाले परामर्श बिना आफूखुसी चस्माको प्रयोग गर्दा मोतिबिन्दु, आखाको लेन्स र पर्दामा असर पुग्नसक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
आँखाको सुरक्षा र आरामका लागि प्रयोग गरिने चस्मामा सुर्यकोपराबैजनी विकिरण रोक्ने लेन्सको प्रयोग हुनुपर्छ । चस्मामा प्रतिबिम्बित प्रकाश रोक्ने पोलोराइज पनि अति आवश्यक हुन्छ । तर बजारमा पाईने धेरै चस्मा प्लास्टिका हुने गर्छन । धेरै मात्रामा प्रकाश लिने यस्ता चस्माले विकिरण रोक्न सक्दैनन् । जसका कारण सुर्यको हानिकारक किरण सिधै आखांमा प्रवेश गरेर जोखिम बढाउछ ।
चस्माको लेन्स मात्र होईन, रंगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने नेत्र विशेषज्ञ बताउछन । धेरै गाढा र अध्यारो चस्माले खुल्ला आँखाले भन्दा बढि विकिरण सिधै आखाभित्र पुर्याउने भएकाले घातक हुने चिकित्सक बताउछन् । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार सूर्यको विकिरण रोक्नसक्ने चस्मा प्रयोग गरे संभावित जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।